» ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु भाग ४ (भिडियो)
ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका प्रतिभाहरु भाग ४ (भिडियो)
२४ भाद्र २०७६, मंगलवार २१:००
चन्द्र घलान, मकवानपुर, २४ भदौ । चर्चित गायन प्रतियोगिता ‘भ्वाईस अफ नेपाल’ को सिजन २ मा अहिले ब्लाईन्ड अडिसन राउण्ड चलिरहेको छ । यस अघिको भिडियो सामाग्रीको तेस्रो भागसम्म ब्याटल राउण्डका लागि छानिएकाहरुमध्ये १५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गरिसकिएको छ । यदि तपाईले उक्त भिडियोहरु हेर्नुभएको छैन भने यस भिडियोको डिस्क्रीप्सनमा लिंक राखिएको छ । भिडियोको यो चौथो भागमा ब्याटल राउण्डका लागि छानिएका थप ५ जना प्रतियोगीहरुका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ । हेरौँ यो भिडियो–
गीता शर्मा, सिक्किम– बुवाले परिवारलाई छोडेपछि पिडामा परेकी गीताले अध्ययन बिचैमा रोकिएपछि संगीतलाई आफ्नो लक्ष्य बनाईन् । आफै कमाउदै सँगीत क्षेत्रमा संघर्ष गरेकी गीता उनले नै संगीत सिकाएका एक विद्यार्थीको अनुरोधमा द भ्वाईसमा सहभागी भएको बताउँछिन् । ३३ वर्षीया गीताले ब्लाईन्ड अडिसनमा अरुणा लामाको ‘पोहोर साल खुशी साट्दा’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । उनको आवाज सुनेर चारै जना कोच उनीतर्फ फर्किएका थिए । उनी सिजन २ मा चारै जना कोचलाई फर्काउन सफल पाँचौ प्रतिभा हुन् । उनी कोच राजुको टिममा छिन् । अडिसनमै राजुसँगै उनले गाएको गीत पनि अहिले भाईरल भईरहेको छ ।
मधु लामा, चितवन– बुवाको गीत सुन्दै संगीत क्षेत्रमा लागेका मधु चितवनमा परिचित नाम हो । बुवाआमाको संघर्ष देखेका उनले आफैले पनि विदेशमा पसिना बगाएका छन् । एसएलसी दिएर कतार गएका उनले त्यहाँ पनि गाउन छोडेनन् । दुःखकै अवस्थामा पनि परिवारको साथ पाएका उनलाई आफन्तले पनि संगितमा लाग्न प्रेरणा दिए । ३० वर्षीय मधुले ब्लाईन्ड अडिसनमा सन्तोष लामा र श्वेच्छा तिवारीको आवाजमा रहेको ‘मैले रोजेको जस्तै’ बोलको गीत गाएका थिए । उनले कोच आश्था बाहेक अन्य ३ जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल भएका थिए । उनी कोच प्रमोदको टिममा छन् ।
राम लिम्बु, विर्तामोड, झापा–स्थानीय ब्याण्डका दाईहरुसँगै गीत गाउँदै हिँड्ने गरेका रामले औपचारिक रुपमा साँगितिक कक्षा लिएका छैनन् । तर उनी गीत गाउन माहिर छन् । २३ वर्षीय रामले ब्लाईन्ड अडिसनमा सविन राईको ‘म संसार जित्ने आँट’ बोलको गीत गाएका थिए । उनको आवाजमा चारै जना कोच फर्किएका थिए । उनी दोस्रो सिजनमा चारै जना कोचलाई फर्काउन सफल छैटौँ प्रतियोगी हुन् । उनी कोच दिपको टिममा छन् ।
वैशाली लामा, सिलीगुडी–भ्वाईस अफ ईण्डियामा समेत भाग लिएकी वैशाली आफ्नै मातृभाषामा प्रतिस्पर्धा गर्न पाएकोमा खुशी लागेको बताउँछिन् । साईबाबाको भक्त रहेकी उनले साई भजनबाटै सँगीतमा पाईला चालेकी हुन् । सानैदेखि गाउन सुरु गरेकी उनले ब्लाईन्ड अडिसनमा ‘लहनाले जुरायो कि’ बोलको गीत गाएकी थिईन् । २५ वर्षीय वैशालीले चारै जना कोचलाई आफुतर्फ फर्काउन सफल भएकी थिईन् । उनी सिजन २ मा चारै जना कोचलाई फर्काउन सफल सातौँ प्रतिभा हुन् । उनी कोच राजुको टिममा छिन् ।
साईकिरण लम्साल, काँकटभिट्टा, झापा–६ वर्षदेखि भजन गाउँदै संगीत क्षेत्रमा लागेका साईकिरण फिटनेस सेन्टर समेत चलाउँछन् । बुवा र श्रीमतीबाट संगीत क्षेत्रमा लाग्न प्रेरणा पाएका साईकिरणले ब्लाईन्ड अडिसनमा नारायण गोपालको प्रियसीका यादहरु बोलको गीत गाएका थिए । उनको आवाज सुनेर चारै जना कोच फर्किएका थिए । सिजन २ मा चारैजना कोचलाई फर्काउन सफल उनी आठौँ प्रतियोगी हुन् । उनी कोच प्रमोदको टिममा छन् ।
आदरणीय दर्शकबिन्द, तपाईलाई यी ५ प्रतियोगीहरुमध्ये कसको आवाज सबैभन्दा राम्रो लाग्छ ? तपाईको विचारमा कुन प्रतियोगीहरु फाईनलसम्म पुग्न सक्छन् जस्तो लाग्छ ? कृपया कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला । साथै यो भिडियोको पाँचौँ भागका साथै भ्वाईस अफ नेपाल सम्बन्धी अन्य जानकारीहरुका लागि हाम्रो च्यानलका अन्य भिडियोहरु पनि हेर्न नभुल्नुहोला ।